Mirongatra ny asan-dahalo any amin’ny Faritra Melaky tato ho ato, indrindra ao amin’ny Distrika Antsalova. Ny 25 aogositra dia notafihan'ny dahalo ny tanànan'i Bevero. Lasa ny omby 30, olona iray no maty lavon'ny balan'ireo dahalo, ary olona roa naratra. Ny 27 aogositra tokony ho tamin’ny 4 ora hariva, notafihan'ny andian-dahalo ny tanànan'Ambalarano, akaikin'i Beraketa amin'ny lalana makany amin’ny Tsingy ny Bemaraha. May tanteraka ny tanàna, lasa ny omby 4. Olona 3 lasan'ireo dahalo natao takalon'aina. Mandry andriran'antsy ireo mponina manodidina Beraketa sy Ankinajao.
mardi, 01 septembre 2020 07:58
Antsirabe: Tokantrano 1000 no nisantatra ny fisitrahana « Vatsy tsinjo »
Notontosaina teo amin’ny Kianja malalaky ACMIL ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fizarana « Vatsy tsinjo » teto Antsirabe ny sabotsy 29 Aogositra 2020. Fianakaviana 1000 isa no nisantatra izany. (Jereo Sary Tohiny)
Olona maherin'ny 8 000 isan-taona no tonga mila vonjy sy fitsaboana eto: - Dispansera sy toeram-pitsaboana,- Ivon-toerana fambolena sy fiompiana,- ivontoeram-pitaizana tanora lahy sy vavy,- toeram-pialokalofana mitaiza vatana sy fanahy. Efa am-polo taonany maro no niasa teto ireto relijiozy Katolika. Tamin'ny taona 1973 no nahazo fankatoavana ara-panjakana ho Tobim-pahasalamana. Mponina maro amin'ireo fokontany ao amin'ireo Kaominina manodidina no misitraka ny asan'ireto relijiozy ireto.
Notanterahina androany alakamisy 27 aogositra 2020 ny lanonana fanolorana ny mari-pahaizana ireo andiany nahavita fiofanana tao amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe. Andiany telo izy ireo, dia ny andiany mivantana faha-41, ny andiany iraisam-piadiana faha-21, ary ny andiany manokana faha-25 mpianatra ho manamboninahitra mpanamory. Teo ambany fitarihan'ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard, ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena ny Jeneraly Ravalomanana Richard ny lanonana. (Loharanom-baovao: Fiarovam-pirenena) (Jereo Sary Tohiny)
Natomboka androany avy hatrany ny fanalana sy fitaterana ireo fako mivangongo isaky ny Fokontany aty Ambatondrazaka. Mandray an-tanana izany ny Governoran'ny Faritra Alaotra Mangoro, ho tan-tsoroka amin’ny fiadidina ny tanànan’Ambatondrazaka. (Jereo Sary Tohiny)
Namoaka an-tsokosoko ireo vy rehetra mandrafitra « Pont Bailey » iray nipetraka tao amin’ny toerana fitobian’entana teny Andohatapenaka ity kolonely iray eo anivon’ny Tafika ity, ary nivarotra izany tamin’ny sandany 20 tapitrisa Ariary teo. Nanao tatitra mikasika ny famoahana an-tsokosoko ireo vy ireo ny tompon’andraikitra tao amin’ny OTU (Office des Travaux d'Urgence) rantsana teo ambany fiahian’ny ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, saingy efa nofoanana ankehitriny. Tonga teny amin’ny Fitsarana ny raharaha ary niakatra Fampanoavana eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo tamin’ny herinandro lasa iny.
Napetraky ny fitondram-panjakana ny fahafahana mangataka findramam-bola eo anivon’ny CNAPS ho fitsinjovana ireo mpiasa eo anivon’ny orinasa tsy miankina mandritra izao hamehana ara-pahasalamana izao. Miisa 1500 ireo mpiasa tao amin’ny orinasa Akanjo Ambatomaro nisitraka izany findramam-bola izany androany 25 aogositra 2020, nanombohana ofisialy ny tetikasa. Tonga teny an-toerana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Misy mandavaka ny fantsona lehibe na « pipeline » mitarika solika avy amin’ny sambo mpitatitra solika miantsona ao amin’ny seranantsambon’i Toamasina mankao amin’ny dépôt Analakininina an’ny orinasa Galana. Vehivavy iray, 50 taona, no nosamborin’ny zandary rehefa nahitana fitaovana ahiana ho misy ifandraisany amin’ny halatra solika amin’ny « pipeline » tao aminy, izay mampidi-doza satria mety hiteraka firehetana tampoka ary tonga amin’ny fipoahana. Nitsoaka kosa ny lehilahy iray tompon’antoka amin’ny halatra. Efa fantatra ny mombamomba azy io ary karohina fatratra izy amin’izao fotoana izao. (Jereo Sary Tohiny)
Raberohoavy Ignace na Rajao ary fantatry ny maro hoe : Dada Jao, anarana hifamatotra amin’ity valanaretina Coronavirus nandavo olona an-tapitrisa manerantany, ary zato mahery teto Madagasikara ity io. Manana fanomezam-pahasoavana izy amin’ny fitsaboana olona amin’ny alalan’ny zava-maniry, nolovainy tamin’ny Ray aman-dReny teo aloha, ary mahay manotra amin’ny alalan’ny rora : kibo mitohana, zazakely misy aretina. Nanao ny evoka antsoina hoe : « Fagnefitany », izay fitambaran’ny zava-maniry maromaro karazany enina i Dada Jao, itsaboana sy fanefitra amin’ny Coronavirus.